Dowlada Yuhuuda Isra’il oo ka Doodeysa in la Joojiyo Aadanka Masaajida | Kismaayo24 News Agency
Dowlada Yuhuuda Isra’il oo ka Doodeysa in la Joojiyo Aadanka Masaajida
Monday November 14, 2016 - 7:27 under Somali News by Tifaftiraha K24
Ra’isalwasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa taageeray hindise la doonayo in lagu aamusiyo mikrofoonadda loo adeegsado aadaanka salaadda ee Masaajidyadda, isagoo sheegay in uu helay cabashooyin ka imaanaya dadka oo ku aadan in dhaawaqa ay dhibaato ku qabaan.
Maalinnimadii shalay guddi dawladdu u xilsaartay arinkan ayaa ka dooday qorshe qabyo ah.
Warbaahinta Israel ayaa sheegtay in talaabadan ay ka joojin doonto Masaajidyadda inay isticmaalaan codbaahiyayaasha ay u adeegsadaan aadaanka saaladda 5-ta xilli.
Dadka wax dhaliilaya ayaa sheegaya in qorshahan uu noqonayo mid aan habboonayn,
In la dhimo dhawaaqa codbaahiyayaasha ayaa wuxuu saamayn doonnaa dhamaan diimaha, laakiin wuxuu si wayn ugu yeelan doonnaa Muslimiinta oo Masaajidyadda ugu yeera dadka Salaadda.
17.5% dadka ku nool Israel ayaaa asalkoodu ka soo jeedaa Carab badankooduna waa Muslimiin.
Nasreen Hadad Haj-Yahya oo ka tirsan machadka Dimuqraadiyada Israel ayaa xu sheegay wargeyska gudaha Israel ka soo baxa in talaabadan lagu sheegayo in dhawaaq lagu dhimayo ay horseedi karto dhawaaq dhibaato ku ah bulasho iyo waliba daddaalada lagu doonayo xal dhab ah loo helo Yuhuudda iyo Carabta.
Ra’isalwasaare Benjamin Netanyahu ayaa u sheegay golaha wasiirada ” ma soo koobi karo, waa tiro fara badan inta muwaadiniintu ay ii yimaadeen iyagoo ka imanaaya gobol kasta kana kooban qayb kasta oo bulshadda ka mid ah, dadkaasi waxay ka cabanayaan codad aan muhiim ahayn oo ka imaanaya guryaha cibaadooyinka”.
“Israel waxaa ka go’an inay shacabkeeda ka ilaaliso wax kasta oo ay la dhibaatooyaan oo dhawaaqan ka mid yahay” ayuu yiri Netanyahu.
One thought on “Dowlada Yuhuuda Isra’il oo ka Doodeysa in la Joojiyo Aadanka Masaajida”
Cabdi Cali 15th November 2016 at 12:35 am